विरास राई ‘फुचुङ’को विचार : व्यतिकरण - LIBJU BHUMJU
विरास राई ‘फुचुङ’को विचार : व्यतिकरण
October 7, 2021 November 17, 2021 लिभु संवाददाताLeaveaComment on विरास राई ‘फुचुङ’को विचार : व्यतिकरण
– विरास राई ‘फुचुङ’
मानिस बहुआयामिक प्राणी हो । ऊ कति बहुआयामिक हो ? यसको चिरफार व्यतिकरण बहसको माध्यमबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ । व्यतिकरण विज्ञानमा आधारित शब्द हो । यसको नेपाली शब्द अर्थ हस्तक्षेप, विरोध, अवरोध हुन्छ । भौतिक विज्ञानमा ‘प्रकाश वा ध्वनिका तरङ्गहरूको समान आवृत्ति’ भन्ने अर्थ लाग्छ । टेलिभिजन, रेडियो प्रसारणमा अवरोध हुँदा कहिलेकाहिँ ध्वनिको उच्च आवाजमा र न्यून आवाजमा सुनिन्छ, यही नै व्यतिकरणको सही उदाहरण हो । व्यतिकरण प्रकाश र ध्वनिमा मात्रै सीमित हुन्न । यो समग्र अस्तित्व वा सृष्टिमै हुन्छ । प्रकृतिमा हुन्छ । मान्छेमा हुन्छ ।
मान्छेमा हुने व्यतिकरणका मुख्य सात प्रेरणाका स्रोत हुन्छन् – अर्थ, अह्म, यौन, पहिचान, शतिm, ज्ञान र सोख । यी चिज उसका प्रवृत्ति पनि हो । यी विन्दुहरूले मान्छेको जीवनलाई एउटा वृत्तजस्तो बनाउँछन् । यिनीहरू बीचको व्यतिकरण नै मानव जीवनको बृहत्तर प्रक्रिया हो । यसबारे थप हेरौँ ।
१. अर्थ : अर्थले धन, सम्पत्ति, उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जनाउँछ । जोन लक, एडम स्मिथको बचत वा माक्र्सको श्रमवादी दृष्टिकोणको टकराव जे भए तापनि मान्छेको बाँच्नु र सरल जीवन व्यतित गर्नु पर्ने बाध्यताका लागि जोहो गरिएको साधन नै धन हो । धन कमाउने वा जोहो गर्ने प्रेरणा मानव आवश्यकता र सोख पूर्ति गर्नकै लागि हो । धन कमाउन श्रम गर्नु पर्छ ।
नितान्त यो श्रमद्वारा सिर्जित हुन्छ । तसर्थ श्रमको सञ्चय नै धन हो । अतीतको श्रम नै धन हो । श्रम आफैमा सङ्ग्रह योग्य छैन । आज काम नगरीकन बसेको मानिसको श्रम भोलिका लागि सङ्ग्रह हँुदैन । तर, जब मानिसले आज काम गर्छ, त्यसबाट आर्जित वस्तु, मुद्रा वा धन भने भोलिका लागि सङ्ग्रह हुन सक्छ । श्रमको प्रतिफल नै धन हो ।
मानिसले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा केही न केही उत्प्रेरणा र प्रतिफल हुनुपर्छ । प्रतिफल सुनिश्चित भएको समाजमा मात्र मानिस सन्तुष्ट, खुसी र सुखी हुन सक्छ । अन्यथा, मानिसका काम गर्ने प्रेरणा र प्रोत्साहन समाप्त हुन्छ । त्यसकारण, धन आर्जन गर्नु मानिसको ठूला आर्थिक प्रेरणा हो ।
२. यौन : यौनले प्रेम, परिवार संरचना र जनसांख्यिक प्रवृत्तिको सामाजिक मूल्यलाई जनाउँछ । यौनको परिभाषा जे–जे गरेता पनि अन्ततः वंशानु कायम राख्नु हो, जनपरिवारको संरचना खडा गर्नु हो । यौनबारे आम जन मानसलाई प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन साधन सम्बन्धी ज्ञान र पहँुच अनिवार्य हुनुपर्छ । अन्यथा ठूलो आकारका परिवार संरचना बढ्दै जाने र एउटा घरमुलीले कमाएका ज्यालाबाट परिवार चलाउनु पर्दाको हालत खराब हुने स्थिति हुन्छ ।
यही अवधारणाले आज युरोप, अमेरिकामा औषत सन्तान दर एक छ । एक सन्तान भएको परिवारमा जति नै गरिब, भारी बोक्ने नै किन नहोस्, दुवै कमाउने छन् भने नाजुक हुने स्थिति आउँदैन । यसका लागि दुई आम्दानी, एक खर्च आकर्षित हुन्छ ।
३. अहम् : आत्मसम्मान र मनोबनोटसँग जोडिएको क्षेत्र हो, अह्म । अह्म जीवतत्वको सार्वभौम गुण हो । अह्मविना जीवन हुँदैन । अह्म छ भने जीवन छ, अह्म छैन भने जीवन पनि छैन । यसको ठिक विपरीत जीवन छ भने अह्म पनि छ, जीवन छैन भने अह्म पनि छैन । हरेक मानिससगँ अहम् हुन्छ भन्ने बुझेर व्यवहार गर्ने हो भने सन्तुलित मानव सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अह्मका मुख्य तीनवटा अवस्थाहरू हुन्छन्, लघुताबोधि, उच्चताबोधि र रचनात्मकताबोधि । विचार संगठन, संर्घष र संस्कृतिका सबै पक्षमा अह्मका यी तीन रूपहरू प्रकट हुन्छन् । संर्घष भनेको वर्गवीचको संर्घष मात्रै होइन, त्यो अह्मबीचको संघर्ष पनि हो । मानिस–मानिस बीचको सम्बन्ध, अह्म–अह्म बीचको सम्बन्ध पनि हो । त्यसैले अह्मका रचनात्मकता सो नभएका समाज कुण्ठाग्रष्त हुन्छ, या त दमित र बुद्धु हुन्छ । या त प्रतिशोधि र ध्वंसात्मक हुन्छ ।
अह्म व्यवस्थापन नभएको समाज बारम्बार कुण्ठाको उत्पत्ति हुन्छ । कुण्ठा स्थितिमा आक्रोश व्यक्त गर्नु, गैरजिम्मेवार बन्दै जानु, चाम्रिएर बदला लिने नयाँ अनुकुल अवसरको प्रतिक्षा गर्नु, संगठन र सम्बन्धको खोजी गर्नु । जब यी लक्षण देखाउँछ, तब सामाजिक सम्बन्धको अभिप्रेरणात्मक भूमिका कमजोर हुन्छ । बारम्बार उत्पन्न हुने असन्तोष, विग्रह, तनाव र विघटन आम अह्मको स्थितिको असन्तुलन हो ।
४. पहिचान : पहिचानले धर्म, संस्कृति, इतिहास, पराम्परा, मूल्य मान्यतासँगको मानवीय सम्बन्धलाई वोध गराउँछ । यो चिज व्यक्ति मात्रै निहित हँुदैन । सामाजिक र राष्ट्रिय रूपमा अझै प्रबल भएर आउँछ । जस्तै भारतमा बिजेपीको उदय नै पहिचान हो ।
५. शक्ति : शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो, शक्ति । वस्तुतः राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक, नोकरसाही आदि सङ्गठनहरूमा व्यक्ति सम्बन्धमा देखाउने प्रवर्गलाई शक्ति भनिन्छ ।
६. ज्ञान : सत्य निष्ठाप्रतिको खोज अनुसन्धान र विश्वास हो, ज्ञान । प्रकृति वा परमात्माका रहस्यप्रति मानवीय रुचि वा निष्ठा नै ज्ञान हो । ज्ञानतत्वले शिक्षा विवेक बौद्धिक कर्म खोज अनुसन्धान आदि प्रवद्र्धन गर्छ ।
७. आत्मसन्तुष्टि (सोख) : मानिसको सोखको क्षेत्र, रुचि, छनोट वा चाहनाको विषय हो, आत्मसन्तुष्टि ।
यी सातवटै चिजहरू व्यक्ति र समाजका व्यतिकरणका तत्वहरू हुन् । सँगसँगै प्रवृत्ति र प्रेरणा पनि हुन् । मान्छेमा यी तत्वहरूबीच व्यतिकरण भइरहन्छ । माक्र्सवादले ‘वर्ग’ आधार बाँकी सबै त्यसका अधिरचना हुन भन्थे । तर क्वान्टम भौतिकीले कुनै पनि तत्वलाई आधार र अधिरचना हैन वृत्तको परिधिमा भएका हज्जारौँ विन्दुको व्यतिकरण मा हेर्दछ ।
तसर्थ यी मध्ये एक निरपेक्ष रूपमा प्रमुख र अरु गौण हँुदैनन् । यी कुनै आधार र उपरिसंरचना तत्व पनि होइनन् । समान महत्वका व्यतिकरण तत्व हुन् । व्यक्ति र समाजको जीवनमा कुनै खास समयमा कुनै तत्व प्रमुख भएर आउँन सक्छ । त्यतिन्जेल अरु तत्व गौण हुन्छ । अर्को परिस्थितिमा प्रधान तत्व गौण र गौण तत्व प्रधान भएर आउँछ । यसरी हुने व्यतिकरण सृष्टिको अनन्तता जत्तिकै अनन्त हुन्छ ।
तसर्थ यी चिजहरूलाई क्वान्टम भौतिकीको नियम श्रृङ्खलाबद्ध नियममा आधारित भएर द्वन्दात्मक अन्तक्र्रियाबाट द्वन्दात्मक सन्तुलनमा राख्न सकियो भने मात्र सभ्य र शालिन मानव व्यक्तित्व वा खुसी समाजको निर्माण हुन सक्छ ।
दर्शनशास्त्रले मानव समाज विकासक्रमलाई कुनै एक आयामबाट व्याख्या गर्न खोजिएको पाइन्छ । जस्तो कि उदारवादीहरूले मानिसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट बढी हेरे । माक्र्सवादीहरूले मानिसलाई आर्थिक समानताको आयामबाट हेरे । ईश्वरवादीहरूले दुःख, करुणा, दया, त्याग, दान, मोक्षको आयामबाट हेरे । अस्तित्ववादीहरूले मानिसलाई अह्म र उच्चतावोधको भावनाबाट हेरे । फ्रायडवादले मानिसलाई मानव जीवनमा यौनको भूमिकाबाट हे¥यो ।
यी सबै दावीबीच पनि मान्छे सिङ्गो थियो । दर्शनले मानिसभित्रको एउटा प्रवृत्तिलाई केन्द्र बनाउन खोजे । तर समग्र मानव व्यवहारिक जीवनचक्र भने कुनै धारामा सिमित हुँदैन, त्यो सर्वाङ्गिण हुन्छ । त्यसकारण सार्वाङ्गिण सोंचको विकास गरिनु पर्छ । सबै दर्शनले समग्र मानवलाई केन्द्र बनाउँनु पर्छ । तबमात्रै सभ्य, सुसंस्कृत र गतिशील समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । धन्यवाद !
(प्रस्तुत आलेख लेखकको निजी विचार हुन् ।)
ध्रुव संयम राईको वाम्बुले मातृभाषामा गीत- “थुनिम कि आथुनिइ”
दशै बहस – दशै बहिष्कार गर्दा राम्लिहाङ र रिदामाहाङलाई झुन्डाएर हत्या
इतिहास दस्तावेज : वाम्बुले राई समुदायमा मुखिया, जिम्मावल
किरात लिपि, किरात भाषाहरूको आलेखन र किरात राई अगुवाहरू
येले संवत्, व्यवहारिक पात्रो निर्माण र प्रयोगको बाटो
कोशकार अविनाथ राईको संस्मरण डायरी ‘लकडाउनमा आफन्तजनको सम्झना : २४ दाइ र भान्जी’
May 10, 2022 May 10, 2022 लिभु संवाददाता
स्थानीय चुनाव–२०७९ : नाता छान्ने कि नेता ?
May 7, 2022 लिभु संवाददाता
धनुष राजु राई ‘राशि’को तीन लघुकथा (वाम्बुले राई भाषामा)
May 6, 2022 May 6, 2022 लिभु संवाददाता
वाम्बुले राईको पहिचान संरक्षणमा अगुवाई गर्दै वाम्रास सुनसरी (फोटो फिचर)
May 1, 2022 May 10, 2022 लिभु संवाददाता
हिलेपानीको पहिलो वाम्बुले डाक्टर बलराज राई
April 30, 2022 May 10, 2022 लिभु संवाददाता
ymfwkw commented on हङकङमा नेपाली पत्रकारिताको स्तम्भ एभरेस्ट खबर पत्रिका र सम्पादक किसन राई: hydroxycloraquine hydroxychloroquine zinc
eoudklbj commented on हङकङमा नेपाली पत्रकारिताको स्तम्भ एभरेस्ट खबर पत्रिका र सम्पादक किसन राई: brand provigil 100mg
embocky commented on यायोक्खाद्वारा ३ लाख २१ हजार राशिको पुरस्कार र छात्रवृत्ति घोषणा: cialis 20mg [url=https://newfasttadalafil.com/]Cia
Man Rai commented on कोशकार अविनाथ राईको संस्मरण डायरी ‘लकडाउनमा आफन्तजनको सम्झना : २४ दाइ र भान्जी’: लेख पढ्न मज्जा लाग्यो अनि शब्दहरू जान्न झन्। कसैकस
Mumche Rai commented on वाम्बुले प्रतिभा : न्युरो दृष्टिविज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दै मिलन राई: आम समचार रुउमाक आ कुचुया मनग्गे ब्वार्म । बाजि ग्व